वालिङ मालपोत कार्यालयमा माछापुच्छ्रे बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर « Lokpath
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले स्याङ्गजाको वालिङ नगरपालिकामा रहेको मालपोत कार्यालयमा बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर स्थापना गरेको छ ।
मालपोल कार्यालयको राजश्व संकलन तथा त्यस वरपरका बासिन्दाको बैंकिङ्ग आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले उक्त एक्सटेन्सन कार्यालय संचालनमा ल्याएको हो ।
साउन ५ गते मंगलवारबाट संचालनमा ल्याईएको एक्सटेन्सन काउण्टरको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलिप प्रताप खाँडले समुद्घाटन गरेका थिए ।
बैंकले देशका हरेक वर्ग र समुदायसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँचका लागि नयाँ नयाँ स्थानहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बैंकले स्याङ्गजा जिल्लाको वालिङ्गमा सुरु गरेको उक्त काउण्टर मार्फत मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण राजश्व संकलनको साथसाथै आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नेछ ।
बैंकको सातै प्रदेशमा आफ्ना १६१ वटा शाखाहरु र १६५ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा, ५ एक्सटेन्सन काउण्टर समेत गरी जम्मा ३३१ स्थानबाट ९ लाख भन्दा बढि ग्राहक महानुभावहरुमा सम्पुर्ण बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,६,बुधबार १०:५७
बीमामा मनोमानी : कोरोना बीमा गर्न अघि सरेका बीमकहरू किन चुके भुक्तानीमा ?
‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भन्ने नेपाली उखान अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा चरितार्थ भएको छ । कोरोना भित्रिएसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू
आरविवि मर्चेन्टमा डिम्याट खाता खोल्न हप्ता दिन
काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि सबैजसो कार्यालयले स्थलगतरूपमै सेवा दिन थाले पनि आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडमा
मौद्रिक नीतिमा चुकेको राष्ट्र बैंक, अर्थले बाटो खोलेपछि सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बाटो खोलेसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक
डलर साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवारका लागि विभिन्न देशका विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आजका लागि अमेरिकी मुद्राको